Awooda Dowlada Dhexe ee Federaalku Xaduud Maleedahay? – MAQAAL • Horseed Media
You are here: Home / Featured / Awooda Dowlada Dhexe ee Federaalku Xaduud Maleedahay? – MAQAAL
Awooda Dowlada Dhexe ee Federaalku Xaduud Maleedahay? – MAQAAL
August 20, 2017 - By: HORSEED STAFF
Dalka Soomaaliya tan iyo intuu xoriyadda ka qaatay gumeystayaashii kusoo duulay waxay ahayd mid u dhisan nidaamka hal dowlad oo awood leh lagana maamulo Muqdisho, balse hadda oo ay qaadatay nidaamka Federaalka ayaa waxaa muuqata inay jirto kala fikir duwanaasho ku aadan awoodaha ay yeelanayaan maamulada xubnaha ka ah Federaalka iyo Xukuumadda Federaalka.
Inkasta oo ay awoodda maamulada iyo midda Federaalka in badan oo kamid ah ku xusan tahay dastuurka Federaalka Soomaaliya, ayaa haddana waxaa jira arrimo badan oo u baahan turxaan bixin.
Arrimaha ku xusan dastuurka Federaalka ee awooda gaarka ah loo siiyey dowlada dhexe ee federaalka ayaa waxaa kamid ah siyaasadda Arrimaha Dibada iyo Gaashaandhigga. Balse su’aashu waxay tahay dowladdu arrimaha dibada iyo Gaashaandhiga miyey kaligeed go’aan ka gaari kartaa iyada oo aan la tashan maamulada kale ee dalka ka jira?
Go’aankii dhawaan Puntland ku dhawaaqday inaysan taageersaneyn siyaasada Xukuumada Federaalka Soomaaliya kula safatay dowlada Qatar ayaa ah mid keentay dood badan.
Dad badan oo kamid ah kuwa ay weli ku qafilan tahay nidaamkii hore ee dowlada dhexe ee Xamar wax walba u talin jirtay ayaa ku doodaya in Tuulooyinka iyo gobalada aan waxba laga weydiineyn siyaasadda arrimaha dibadda, waa sida ay hadalka u dhigayaanee.
Halka kuwo kalena ay qabaan fikirka ah “Miro gunti kuugu jira kuwo geed saaran looma daadiyo..” oo micnaheedu tahay waxa aad heysato ku tasho oo difaaco.
Waxaa iyaguna jira kuwo fikirkooda uusan dhaafin ama ka gudbin aragtida ama siyaasadda ku dhisan qabiilka iyo qabyaaladda oo iyagu kuwaasi way adag tahay in dood cilmiyeed dheer aad la gasho.
Haddaba labada kooxood ee hore hadii aan eegno mid waliba waxa uu ku doodayo waxaa kuu soo baxeysa in weli aan la xalin arrimo badan oo danwadaag ku tahay ummada Soomaaliyeed, taasina ay salka ku heyso kalsooni la’aanta ka dhalatay dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dalka Soomaaliya.
Taariikh Kooban – Puntland (Ex- Gaari Waa)!
Deegaanka Waqooyi Bari Soomaaliya waa dhul taariikh dheer leh kahor duulaankii gumeystayaashii Ingiriiska iyo Talyaaniga, waxay dhulkaasi lahaayeen maamulo u gaar ah oo hoos taga Boqortooyooyinkii halkaasi ka jiray.
Xiligii Awoodda reer Yurub ay kusoo duuleen Afrika, maamuladii ka jiray dhulkaasi waxay isku dayeen inay la ciyaaraan siyaasad ku aadan xulufeysi si aan dhulka loogala wareegin, waxaana kamid ahaa;
1- Heshiisyadii dhexmaray Talyaaniga iyo Boqor Cismaan Maxamuud oo ka talinayey qaar kamid ah dhulka hadda Puntland loo yaqaan, si uu uga gaashaanto Ingiriiska oo xiligaasi qabsaday dhul badan oo Yemen ku jirto, heshiiskaasi ayaa burburay kadib markii Talyaaniga uu go’aansaday inuu kusoo duulo oo xoog ku qabsado dhulka Soomaalida.
2- Heshiiskii Sayid Maxamed (Darawiish) la galay Talyaaniga si Boqortooyadii Baargaal looga dhaadhiciyo in la dajiyo Daraawiishta degmada Eyl, xiligii uu Sayidka dagaalka kula jiray Ingiriiska. Si Darawiish u hesho dhul xeebeed ay hub iyo ganacsi kasoo dajiso.
3- Heshiiskii 1888 ee dhexmaray Talyaaniga iyo Suldaan Kenadiid oo ka talinayey Hobyo iyo gobalada dhexe oo isaguna dagaal kula jiray Boqortooyadii Barqash ee ka talineysay koonfurta Soomaaliya illaa iyo Zanzibar.
Heshiisyadaasi ayaa ahaa in Talyaaniga uusan ciidamo ama farogelin kusoo sameyn dhulka ay ka taliyaan, isla markaana iska baheystaan awoodihii kale ee dhulkaasi ka jiray sida Ingiriiska, Boqortooyadii Itoobiya, Boqortoyadii Cumaaniyiinta Barqash iyo Germany oo mar qabsatay Kismaayo.
Sadexdaas maamul oo Soomalida ah oo iyagu dhexdooda dagaal ka dhaxeeyey iyo loolan dhaqaale iyo mid siyaasadeed ayaa kawada sinaa dagaalkii ay kula jireen Boqortooyadii ka talisay Itoobiya.
Dhamaan xulufeysiyadaasi ayaa burburay isuna bedalay dagaal kadib markii Talyaaniga si toos ah ciidamo ugu soo diray dhulka Soomaalida, waxaana halkaasi burbur xoogleh dagaaladaasi kasoo gaaray maamuladii markaasi jiray sida magaalada Baargaal oo uu Talyaaniga ku burburiyey Maraakiibtiisa dagaalka, ugu danbeyntiina Boqor Cismaan lagu soo xiray degmada Shangaani ee magaalada Muqdisho.
Heshiiskii Keenadiid iyo Talyaaniga ayaa burburay kadib markii Ingiriiska hishiis hoose la galay Talyaaniga inuu ka dhaadhiciyo Saldanadii Hobyo ee Kenadiid inay oggolaato in dhulkeeda ay soo maraan Ciidamo ka tirsan Boqortooyadii Ingiriiska oo doonayey inay dhabar jabiyaan Ciidamadii Darawiish ee uu hogaamin jiray Sayid Maxamed Cabdulle Xasan.
Dhamaan hogaamiyayaashii laga soo qabtay maamuladii Boqortooyadii Baargaal iyo Saldanadii Hobyo waxaa lagu soo wada xiray dhamaantood magaalada Muqdisho, oo ay ugu horeeyeen Suldaan Cali Yusuf (Kenadiid) iyo Boqor Cismaan oo lagu kala xiray laba fookh oo looga dhisay Ceel Gaab iyo Shangaani.
Taariikhdaas kooban ayaa waxaa usoo qaadanay inaan muujino marxaladihii ay Soomaaliya soo martay kahor intaan dhulka Soomaali gebi ahaan la wareegin gumeystayaashii kala qeybiyey. Kadibna Soomaali oo dhan ku midowday dagaal xoriyad doon ah oo muddo dheer qaatay.
Kadib xoriyadii Soomaaliya iyo dhismihii dowladii Soomaaliya ee mideysay Waqooyiga iyo Koonfurta, waxaa jiray hal maamul oo ka taliya dalka oo saldhigiisu yahay Muqdisho.
Dhulka hadda loo yaqaan Puntland, tan iyo burburkii dagaaladii Talyaaniga iyo Boqortooyadii Baargaal ma jirin wax horumarin ah oo dhulkaasi laga sameeyey, waxayna inta badan dadkii aqoonta lahaa iyo ganacsatadii waaweyneed ee dhulkaasi kasoo jeeday intooda badan ku sugnaayeen Muqdisho oo ay maalgashteen, waxaana dhulkaasi (Puntland) loo bixiyey “Gaari Waa”.
Kadib markii ay dhaceen dagaaladii Sokeeye ee Soomaaliya 1991, waxay inta badan dadkii kasoo jeeday Puntland ku khasbanaadeen inay dib ugu noqdaan dhulkii awoowayaashood kasoo jeedeen ee horey ugu bixiyeen “Gaari Waa”. Waxayna halkaasi si iskood ah u dhisteen magaalooyinkii horey loo dayacay.
Kadib markii uu xoogeystay ganacsigii dhulkaasi ka bilowday iyo dib u dajintii dadkii kasoo qaxay Koonfurta Soomaaliya ayaa waxaa bilowday baahi loo qabay maamul wax ka qabta arrimaha ay ugu horeysay amniga, la dagaalanka Isbaarooyinka, bixinta canshuuraadka iyo hormarinta adeega asaasiga ah.
Dhismihii Puntland ayaa ahaa mid deegaankaasi loogu sameenayey ismaamul qabta hawlaha amniga oo la siiyey ciidamo deegaanada laga kala keenay kuwaasi oo ku guuleystay muddo yar inay kusoo afjaraan maleeshiyaadkii kala duwanaa ee dhulkaasi khal khal gelin jirey, waxaa la taabo geliyey nidaamka canshuurta, waxaana hana qaadey nidaam dadku ku mideysan yahay.
Tan iyo 1998 waxaa u bilaamatay dadka dhulkaasi Nolol Cusub iyo isku filnaansho ay uga maarmeen adeegyadii ay qaban jirtey dowladii dhexe ee Soomaaliya, balse waxay aminsanaayeen in loo baahan yahay Dowlad dhexe ee Soomaaliyeed si loo helo Qarankii burburay. Waana midaas tan keentay in Puntland dhaqaale iyo dhiig badan ku bixiso dhismihii dowlada Federaalka ee hada ka talisa Villa Soomaaliya, Axdigii Puntland lagu dhisey waxaa saldhig u ahayd in Puntland baadigoob u gasho Dowlad Federaal ah oo Soomaali u dhan tahay.
Arrintan ayaa keenaysa in shacabka ku nool Puntland ay in badan aaminsan yihiin [Soomaali-Weyn] balse aysan ka tageyn wixii ay gacantooda ku dhisteen oo ah nidaamka Puntland oo ay uga badbaadeen burburkii iyo khasaarihii ku habsaday koonfurta Soomaaliya.
Siyaasiyiinta Koonfurta iyo Fikirkooda!
Inta badan Siyaasiyiinta Koonfurta ha ahaadaan kuwii horey u soo noqday Hogaamiye kooxeedka ama siyaasiyiintii dibada u qaxay intaba ayaa ah kuwo ay weli ku qafilantahay nidaamkii Dowladii Dhexe ee Awooda laheyd ee ka talin jirtay Muqdisho.
Waxayna aaminsan yihiin haddii ay xil ka qabtaan Muqdisho inay sidii ay doonaan ka yeeli karaan nidaamyadii horey u jiray sida Puntland ama xataa Somaliland, iyagoo aan fahmin in dadkaasi wixii ay dhisteen kuna tacab beeleen aysan u burburin karin ragga Muqdisho xilka ka qabta oo laftooda aan wax badan u qaban dhulka ay kasoo jeedaan oo ay magan ugu yihiin ciidamo ajaanib ah sida AMISOM iyo awoodaha shisheeye ee lacagta badan geliyey Dowlada Muqdisho.
Marka Xaalku halkaas marayo way adkaaneysaa inay is af-fahmaan labadaan qolo ee kala taariikhda noqday tan iyo burburkii dowladii dhexe ee Soomaaliya.
Talo! – Mas’uuliyiinta Federaalka
Dowlada Federaalka iyo mas’uuliyiinta xilka ka qabtay waxaa loo baahan yahay inay ogaadaan dowladnimada ay maanta sheeganayaan inay awoodii ugu weyneyd ee kusoo mintiday inay dhismato inuu ahaa maamulka Puntland, isla markaana laga faa’iideysto rabitaanka shacabka Puntland ee doonaya dowlad-wadaaga Soomaali weyn.
Wixii burbur ku keenaya Puntland dhaqaalaheeda iyo amnigeeda waa inay dowlada Federaalka ka fogaataa isla markaana gacan ku siisaa maamuladeeda sida Puntland iyo kuwa kaleba inay noqdaan kuwo horumar gaara.
Fikirkii ahaa (One State One City) wuxuu dhintay 1991dii taasina waa inay ogaadaan mas’uuliyiinta dowlada Dhexe oo aysan ka fekerin Muqdisho oo kaliya, balse gobalada dalka oo dhan ay si siman ugu shaqeeyaan.
Dowlada Federaalka waa inay ka talo gelisaa maamulada dalka ka jira arrimaha muhiimka ah ee Siyaasada Arrimaha Dibada iyo Gaashaandhiga kuwaasi oo laftooda taabanaya arrimaha gudaha ee maamuladaasi.
Tusaale waxaa kuugu filan waxa hada ka socda dalka Maraykanka, khilaafka maamulada (States) iyo Dowlada dhexe ee Federaalka Washington DC oo hada arrimo badan ku kala aragti duwan.
Maamulka California wuxuu qaadacay siyaasadii arrimaha dibada ee Madaxweyne Trump ee ku aadan arrimaha bay’adda iyo ka bixitaankii Maraykanka uu ka baxay heshiiskii caalamiga ahaa ee Cimilada isbedaleysa ee lagu saxiixay Paris 2015. In ka badan 30 maamul oo gobalada Maraykanka kamid ah ayaa arrintaasi uga horyimid xukuumada Washington DC ee Trump hogaamiyo, maadaama ay sheegeen in siyaasadaasi dibada ee xukuumada Trump ay dhaawaceyso cimiladooda iyo waliba ganacsigooda.
In ka badan 50 magaalo oo waaweyn oo ka tirsan Federaalka Maraykanka iyo waliba Canada ayaa kasoo horjeestay sharciyada cusub ee dowladaha dhexe ku donayaan inay ku tarxiilaan dadka aan sharciga heysan waxaa loo yaqaan (Sanctuary cities),
HAA – Awooda Dowlada Dhexe waxay leedahay Xaduud.
Go’aanka Puntland qaadatay waxay ku doodeysa inay tahay mid ay ku badbaadineyso Dhaqaalaha Dalka Soomaaliya oo dhan oo ku xiran Sacuudiga iyo Imaaraatiga, halka Saraakiisha Villa Somaliya ay u muuqato lacagta Qatar iyo Turkiga ku kabo miisaaniyada Dowlada Federaalka.
Talo! – Puntland
Shacabka Puntland iyo maamulkoodaba waxaa la gudboon inaysan ka daalin taageerida dowlada Federaalka iyo horumarka nidaamka dowladeed ee curdanka ah, isla markaana ogaadaan in dalka dib u heshiisiin ay ka dhici doonto lagu xaliyo wixii dhacay xiligii dagaalada sokeeye hadii ay ahaan lahayd naf iyo maalba.
Sidoo kale maamulada kale ee dalka ka jira ayaa iyaguna u baahan inay qaadaan waddada Puntland ee ah inay awoodooda ku tashadaan ciidamo ay iyagu leeyihiina sameystaan, si looga kaaftoomo shisheeyaha dalka ku sugan oo wakhtigiisa ku eg yahay 2018 sida la qorsheeyey. Markii maamulada dalka ay awood yeeshaan bay awood yeelan kartaa dowlada dhexe ee Federaalka Soomaaliya.